मोबाइल बैंकिङमार्फत् कारोबार गर्नेको संख्या बढ्यो, एक महिनामै ३० अर्ब २८ करोडको कारोबार - Aarthiknews
मंगलबार, १३ माघ २०७७ Tuesday, 26 January, 2021
मोबाइल बैंकिङमार्फत् कारोबार गर्नेको संख्या बढ्यो, एक महिनामै ३० अर्ब २८ करोडको कारोबार
काठमाडौं । एक महिनामै मोबाइल बैंकिङमार्फत् ३० अर्ब २८ करोडको कारोबार भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मंसिर महिनाको तथ्यांकअनुसार मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोगकर्ता गत महिनाको तुलनामा झण्डै ५ अर्बले वृद्धि भएको छ । कात्तिक सम्ममा ७६ लाख ४३ हजार २ सय ९६ पटक मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रयोग भएको थियो । उक्त संख्यामा वृद्धि हुँदै मंसिरमा ८३ लाख ८६ हजार ४ सय ७० पटक कारोबार भएको छ । जुन कात्तिक महिनाको तुलनामा ७ लाख ४३ हजार १ सय ७४ बढी हो ।
तथ्यांक अनुसार कारोबार रकम पनि ठूलो मात्रा बढेको छ । कात्तिक महिनामा मोबाइल बैंकिङमार्फत कुल २५ अर्ब ६५ करोड ४ लाख रुपैयाँको कारोबार भएकोमा मंसिर महिनामा ३० अर्ब २८ करोड ७ लाख कारोबार भएको छ । इन्टरनेट बैंकिङमार्फत हुने कारोबार तथा प्रयोग पनि बढेको छ । कात्तिकमा २ लाख २१ हजार ४०५ पटक इन्टरनेटबाट बैंकिङ कारोबार भएको थियो । तर, मंसिरमा सो संख्या बढेर २ लाख ४५ हजार २ सय ८६ पुगेको छ भने कारोबार रकमसमेत वृद्धि भएको छ ।
तयस्तै, कात्तिकमा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत ५ अर्ब ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँको कारोबार भएकोमा कात्तिकमा भने ७ अर्ब २० करोड ६० लाख रुपैयाँ कारोबार भएको छ । यता, क्यूआरमार्फत हुने कारोबारमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार मंसिरमा क्यूआरमार्फत कुल ३ लाख ४३ हजार ५७४ पटक कारोबार भएको छ । जुन, अघिल्लो महिनाको तुलनामा बढी एक लाख भन्दा बढी पटक कारोबार भएको देखिन्छ ।
कात्तिकमा क्यूआरमार्फत कुल २ लाख ४१ हजार ८१८ पटक कारोबार भएको थियो । कारोबार संख्यासँगै कारोबार रकममा ठूलो मात्राले वृद्धि भएको छ । कात्तिक महिनामा क्यूआरमार्फत ९३ करोड ९० लाख रुपैयाँको कारोबार भएकोमा मंसिरमा बढेर १ अर्ब २५ करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ ।
यता, अनलाइनबाट खरिद गर्ने क्रम भने घटेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार मंसिरमा कुल १ लाख ८ हजार ४ सय ५९ पटक अनलाइन सामान खरिदका लागि भुक्तानी भएको छ । जुन अघिल्लो महिनाको तुलनामा झन्डै ४ हजारभन्दा कम हो । किनभने कात्तिकमा कुल १ लाख १२ हजार ७ सय ६ पटक भुक्तानी भएको थियो ।
दोस्रो त्रैमासमा अपि पावरको नाफा १४ करोडभन्दा बढी
भरतपुर महानगरमा उद्योग ग्राम निर्माण शुरु
इजीलिंकको सेवा अब अष्ट्रेलियाबाट पनि
सुनको मूल्यमा गिरावट, आज कति छ मूल्य ?
मलाई बिल गेट्सलाई भन्दा बढी पैसा चाहिएको छः आनन्दराज बतास
राष्ट्र बैंकले आज १० अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै
ओप्पोले ल्यायो फाइभजी स्मार्टफोन, कति छ मूल्य ?
प्रदेश १ का ३५ हजार स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाइने
आरएसडिसी लघुवित्तको नाफा ५ करोडभन्दा बढी
भेगास सिटीको लिलामी प्रक्रिया सुरु, सुधीर बस्नेतलाई अर्को संकट
अरुण भ्यालीको हाइड्रोपावरको नाफा दोब्बर, विद्युत् बिक्री घट्दा पनि रिपोर्ट उत्साहजनक
नारायणी डेभपलपेन्ट बैंकको हकप्रद शेयर आजदेखि खुल्दै
३७ लाख नाघ्यो स्थायी प्यान नम्बर लिनेको संख्या
यी हुन् सोमबार सर्वाधिक शेयरमूल्य बढ्ने ६ कम्पनी
एनसीसी बैंकबारे बजारमा भएको हल्ला हल्लै मात्र
नेपाल लाइफको ५१ प्रतिशत लाभांश सुरक्षित गर्ने मंगलबार अन्तिम दिन
नागरिक लगानी कोषको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढ्यो
शेयर बजारमा करेक्सन
बैंकिङ कसूर मुद्दाका फरार अनामनगरबाट पक्राउ
३८ बीमा कम्पनीले गरे ७८ अर्ब बीमा शुल्क आर्जन,नेपाल लाइफ र शिखर अगाडि
ज्योति विकास बैंकको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन
सातौं महिला उद्यमी सम्मेलन आयोजना–२०२१
नेप्से उच्च विन्दुमा, २८.५९ अंकले बढ्यो, झण्डै ५ अर्बको कारोबार